မန္တလေး Archives - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
November 24, 2020 November 24, 2020 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ၂၀၁၉ ခုနှစ်က မန္တလေး- စစ်ကိုင်း ကားလမ်းမပေါ်ရှိလမ်း/ကျူးအိမ် ၉ လုံးအား ဖျက်သိမ်းခဲ့မှုကို လက်ရှိအဖြစ်အပျက်သဖွယ်မျှဝေနေ
မန္တလေး- စစ်ကိုင်း ကားလမ်းမပေါ်ရှိ လမ်း/ကျူးအိမ် ၉ လုံး အား ဖျက်သိမ်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ live ဗွီဒီယိုတစ်ခု လူမှုကွန်ယက်မှာပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး ဒီဗွီဒီယိုကို လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူ ၂ ထောင်ကျော်က ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဗွီဒီယိုမှာ အိမ်တစ်လုံးကို စည်ပင်သာယာရေးဝန်ထမ်းတွေက ဖြိုဖျက်နေပြီး ကလေးငယ်တစ် ယောက်ကို ပွေ့ချီထားတဲ့ အမျိုးသမီးက ဝန်ထမ်းတွေကို တားဆီးရင် ရန်လုပ်နေပုံနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေက ဖြန်ဖြေ ခေါ်ယူနေ ပုံတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုပို့စ်အကြောင်းအရာဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၇ ရက်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိအဖြစ်အပျက် မဟုတ်တာကို Fact Crescendo Myanmar ကတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီပို့စ်ရဲ့အောက်ခြေမှာ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူ တစ်ဦးကလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်က အဖြစ်အပျက်ကို အခုမှ ပြန်ထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုထားတာတွေ့ရပါ တယ်။ […]
November 18, 2020 November 18, 2020 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: ရင်ခေါင်းအထူးကုဒေါက်တာအောင်သက်ဇော်ကွယ်လွန်ဆိုတဲ့ သတင်းတုတစ်ကျော့ပြန်ပျံ့နှံ့
စဉ့်ကိုင်ကနေ ရန်ကုန်ကို Volunteer လာတဲ့ အဆုတ်နဲ့ရင်ခေါင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သက် ဇော်ကွယ်လွန်မှုအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းလို့ရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု လူမှု ကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့လျက် ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ ပို့စ်မှာ “ #အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းနှင့်အတူလေးစားဂုဏ်ပြုလျက်ပါ . ဒေါက်တာအောင်သက် ဇော် (၃၇)နှစ် စဉ့်ကိုင်ကနေ ရန်ကုန်ကို Volunteer လာတဲ့ အဆုတ်နဲ့ရင်ခေါင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် မန္တလေး မှ ရန်ကုန်သို့ Volunteer အဖြစ်သွားရောက်ကူညီတဲ့ ဆရာမတစ်ဦး ကွယ်လွန်…။ ( ၁၆ . ၁၁. ၂၀၂၀ ) ၊ ရန်ကုန် တိုင်းပြည်အတွက် . . . ပြည်သူအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါ။ ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ပါစေ။”(မူရင်းအရေးအသားအတိုင်း)လို့ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီပို့စ်ဟာ သတင်းတုသတင်းမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ပထမပတ်ကလည်းပျံ့နှံ့ခဲ့ဖူးတာတွေ့ရပြီး Crescendo […]